Cujo | HoLOLo....DiLoLO
…တူးပို့.. တူးပို့.. တူးသံမြူးသာယာ…
.. ရေမပက်တဲ့ အပျိုတွေ မုဆိုးဖိုနဲ့ညားပါစေ.. ဗွမ်း..
ဟိုမှာ ဟိုမှာ.. ဟိုကားပေါ်က ခွေးကလေး တစ်ကောင်ကျကျန်ခဲ့တယ်.. လမ်းအလယ်မှာလေ.. သွားခေါ်ထားလိုက်ပါ.. အိုး.. မြန်မြန်.. ကားတွေတိုက်သွားဦးမယ်..
တစ်ကိုယ်လုံး မည်းနက်နေတာပဲ.. ကြည့်စမ်း.. တကယ့် blackyပဲ.. ပြုတ်ကျသွားတာ သိရင် လာပြန်ရှာမယ်ထင်တယ်..
ဒီမှာပဲ ထားထားလိုက်မယ်လေ.. ချစ်စရာလေးနော်.. ခွေးပေါက်စနကလေးပဲ ရှိသေးတာ.. သင်္ကြန်လည်တယ်ပေါ့လေ… ဟေးဟေး
ဟဲ့… အဲဒါ မနေ့က ခွေးကလေး မဟုတ်လား.. သူ့သခင်က လာပြန်မခေါ်ဘူးလား ..
အေး.. လာမခေါ်ဘူး.. အိမ်မှာမွေးလိုက်တော့မယ်..
ရိုးရိုးခွေးလေးလား.. စပ်ထားတာလား မသိဘူးနော်..
အင်း.. ဒိုဘာမင်နဲ့စပ်ထားတယ်လို့ ပြောတယ်ဟ.. ဆိုးမယ့်ရုပ်လေးနော်..မွေးထားလိုက်မယ်လေ… ဘာကျွေးရမှန်းမသိလို့.. ညကတော့ ငါတို့ အမြည်းလုပ်မယ့် ကြက်ကြော်တွေ ကျွေးလိုက်ရတယ်..
cujo.. cujo..မလုပ်နဲ့စမ်း.. ကလေးကို.. နင်ကတော့လေ.. blacky.. လာသား.. ကြောက်သွားလား.. cujo စတာပါ..
cujo..blackyက သားနဲ့ တူတူနေမှာလေ.. သားက ထိန်းရမှာပေါ့.. ဒီလိုအနိုင်မကျင့်ရဘူးလေ.. cujoလေးက လိမ္မာပါတယ်..
blacky.. cujo.. လာခဲ့စမ်း.. ခုပြန်လာ…. အစ်မ ရလား.. လန့်သွားလား အစ်မ… မကိုက်ပါဘူး.. သူတို့က..
cujoနော်.. cujo.. နင်ရှေ့ကနေ.. လုပ်ပြသမျှ ဟိုblack က အကုန်လိုက်လုပ်တာ.. နင်က အီးပေါလော.. တကယ်မကိုက်ဘူး.. ဟိုက တကယ်သွားကိုက်မှာ.. ငါ့နှယ် စိတ်ညစ်ပါတယ်..
blacky.. ပြောပြလိုက်ပါဦး သားရယ်.. ကိုကိုcujoကို.. ရေချိုးရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ.. cujo လာ.. ရေချိုးမယ်.. ပြေးပြီတွေ့လား..
cujoကနော်.. blackကိုဆို အကုန်မနာလိုဖြစ်တယ်.. လည်ပတ်ပတ်ပေးရင်.. သူလည်းပတ်ချင်တယ်.. blackကိုပွတ်ပေးရင်.. သူလည်းပါမယ်.. ဟင်း.. ခုရေချိုးပေးတော့ မပါချင်တော့ဘူး.. ပြေးပြီ.. အရင်ဘ၀က ရေနစ်သေတာများလား မသိ.. ရေဆို အသားကုန်ကြောက်တယ်.. black ကတော့ ရေချိုးရတာ ကြိုက်တယ်နော်.. သားနော်..
ဟဲ့.. ခုပဲ သွားတာ.. ခုပဲ ပြန်ရောက်ပြီလား.. မြန်လိုက်တာ..
ဘယ်ကလာ.. ပြန်လှည့်လာရတာ.. အမေ့ cujo နဲ့ blacky လေ.. တောက်လျှောက် ဆိုင်ကယ်နောက်လိုက်လာတာ.. ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရဘူး.. ပြန်ခေါ်ထားဦး.. နှစ်ကောင်ပေါင်း လောင်းကျော်… ဒီနှစ်ကောင် ဘယ်လို ၀ါသနာမျိုးမှန်း မသိဘူး.. .. သွားလေရာ လိုက်ချင်တယ်.. မလိုက်နဲ့ဆို မလိုက်နဲ့ပေါ့.. နောက်ကျနေပါတယ်ဆိုမှ.. အိမ်ထဲမှာ တံခါးခဏပိတ်ထားလိုက်ပါဦး..
တွေ့လား.. တွေ့လား.. ပြန်ထွက်မှာ သိနေတော့ အိမ်ထဲမ၀င်ချင်ဘူး.. ငလည်တွေ..
ခေါ်ထား အမေ.. ဟိုဘက်က ပတ်ထွက်လိုက်မယ်..
အယ်.. blacky.. အောက်မှာအိပ်လေ သားရယ်.. ပေါင်ပေါ်မှာ အိပ်လို့ ဘယ်ရမတုန်း.. မမစာဖတ်နေတယ်လေ.. အမေ.. ဒီမှာလာကြည့်ဦး.. အမေ့သားတွေ.. အောက်က တစ်ကောင်က ခြေထောက်ကို အတင်းတိုး.. ဒီတစ်ကောင်က ပေါင်ပေါ်အတင်းတက်.. ဘယ်လိုများ ဖြစ်ပြီး.. ဒီလောက်ကပ်ချွဲနေကြလဲ မသိပါဘူး.. နော်.. အေးအေးဆေးဆေး စာဖတ်ပါရစေ…. နင်တို့နှစ်ကောင်နဲ့တော့ ငါရူးမှာပဲ..
ဆုဆု.. ဗိုလ်န. ခဏလာကြည့်ကြဦး..
black လေ.. ဟိုဘက်အိမ်က ကြက်တွေ သွားကိုက်တယ်.. အဲဒါ cujo လုပ်ပြတာ.. ဟိုကောင်က တကယ်ကိုက်ပလိုက်တယ်.. blackyကလည်း ခု တော်တော်လေးကိုထွားလာတာပဲ.. အကောင်ကြီးက ကြီးလာတော့ ဆွဲလို့ကို မနိုင်ဘူး..
အောင်မလေး.. နင်တို့ခွေးကို လုပ်ပါဦး..
blackyလာလာ သား.. သားကလည်း ဒေါသကြီးပဲ.. ကိုယ့်အိမ်လာတဲ့သူလေ.. စိတ်လျှော့.. စိတ်လျှော့..
အမေ.. black ကမလွယ်ဘူးနော်.. ကြီးလာတော့ ဒေါသတအားကြီးတယ်..
ချည်တော့ မချည်ထားချင်ပါဘူး.. သနားပါတယ်..
နေ့ဘက်တော့ ချည်ထားမှ ရတော့မယ်.. မနက်ဆို ချည်ထားလိုက်.. ညဘက်မှ လွှတ်တာပေါ့.. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ.. လူတွေက ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ များတော့ ကိုက်မိသွားဦးမယ်..
blacky blacky.. ဘယ်ရောက်နေတုန်း.. blacky.. blacky
ဟော.. လာပြီ.. လိမ္မာလိုက်တဲ့ blackလေး.. လာ.. လာ.. ဘယ်များ သွားလည်နေတာလဲ.. ကြိုးချည်လိုက်တော့မယ်နော်.. လိမ္မာလိုက်တာ..
ဆုဆု.. ဟိုမှာ blacky အော်နေပြီ.. ထမင်းမကျွေးရသေးဘူးလား..မိုးချုပ်နေပြီ.. သွားကျွေးပြီး ကြိုးလွှတ်ပေးလိုက်…
အာ.. မေ့သွားလို့ .. ဆောရီးနော်.. blackလေး.. အပြင်သွားချင်နေပြီလား.. ရော့.. ရော့.. ထမင်းစားလိုက်ဦး.. ပြီးရင် သွားနော်..
ကိုကိုကြီး.. ဟိုမှာ အန်တီအေးဝင်း တိုင်ပြန်ပြီ.. ညက blacky ကြက်တွေ ကိုက်ပစ်လိုက်ပြန်သတဲ့..
ဟေ.. လုပ်ပြန်ပြီလား.. လျော်များလျော်ရရင် လျော်မလောက်ဖြစ်တော့မှာပဲ..
အေးလေ.. ဟိုအိမ်မှာလည်း ကုန်ပြီ.. ကြက်တွေ.. ဒင်းကိုက်တာနဲ့.. ငါလည်း အားနာလိုက်တာနော်..
ဟဲ့.. ဆုဝေ. နင့်ခွေးက ကြောက်စရာကြီးနော်..
အောင်မလေး.. လွတ်သွားမှဖြင့်.. အတင်းရုန်းနေတာ ကြည့်ပါဦး…
ရတယ်.. ငါဆွဲထားတယ်.. သွား.. သွား..
နင့်ကိုလည်း ကိုက်မိဦးမယ်နော်.. ကြည့်လည်းလုပ်ဦး..
ဘယ်တော့မှ မကိုက်ဘူး.. ခုကြည့်.. တွေ့လား.. သခင်ဖက်ထားရင်.. တဖြည်းဖြည်း.. ဒေါသပြေသွားပြီ.. ခွေးပါဟ.. သစ္စာရှိတယ်..
သိလား.. အမေ.. သိလား.. ဟိုနေ့က ဟိုကောင်နှစ်ကောင် ပေါင်းပြီး.. ကြောင်ကို မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်..
ဘယ်ကကြောင်တုန်း.. ငါမရှိတဲ့တပတ်.. ဘယ်ကကြောင် ရောက်လာတာလဲ..
အမေကလည်း ကြောင်မွေးချင်ပါတယ်ဆိုမှ.. ကိုကိုငယ်သူငယ်ချင်းဆီက ကြောင်တစ်ကောင်ရတယ်.. သူတို့အိမ်မှာ တခြားကြောင်တွေ ၀ိုင်းကိုက်လို့ တုတ်တန်းပေါ်မှာ တက်နေရတယ်ဆိုပြီး.. ဒီကိုပေးလိုက်တာ.. နက်နက်လို့တောင် နာမည်ပေးပြီးပြီ.. ကြောင်က ကြောက်တတ်ပါတယ်ဆိုမှ.. ဟိုနှစ်ကောင် ၀ိုင်းလိုက်လိုက်တာ.. ဘယ်ကိုပြေးသွားမှန်းကို မသိတော့ဘူး.. ရှာမတွေ့တော့ဘူး.. ဟိုအိမ်မှာဆိုရင်တောင် ပုန်းပြီးနေလို့ရသေးတယ်.. ခုတော့… လမ်းဘေးကြောင် ဖြစ်ပါပြီ.. ဟိုနှစ်ကောင်ကြောင့်..
blacky ရှိနေရင် ကြောင်မွေးလို့ မရပါဘူးဆိုနေမှ.. နင်တို့ကလည်း ဘာလို့မွေးချင်ရတာလဲ.. မမွေးနဲ့..
ဟဲ့.. blacky တစ်ကောင် ပြန်မရောက်သေးဘူးလား.. ၁၀နာရီတောင် ရှိနေပြီ..
လျှောက်လည်နေပြန်ပြီပေါ့..အမေရယ်.. ပြန်လာမှာပါ.. ထားလိုက်..
အော်.. blacky ဒီအပြင်မှာ အိပ်နေတာကိုး.. ခြံထဲဝင်လေ.. ဟဲ့… black.. black..
ဟာ..အမေ.. black သေနေတာလားမသိဘူး.. ဟုတ်တယ်.. သေသွားပြီ…. ဟာ…
ဆရာမတို့အိမ်က ခွေးထင်တယ်.. အမည်းလေးဟာလေ… မနက်က ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရှေ့မှာ.. ကားတိုက်မိတယ်.. ဖြတ်ကျိတ်သွားတာ.. ဘာမှတော့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်.. ပြန်ထပြေးသွားတာပဲ..
ဟိုး လမ်းထိပ်ကနေ.. အိမ်အထိ ရအောင်ပြန်ပြေးလာတာပေါ့.. ဒီရောက်မှ သေသွားတာ.. ငါ့ခွေးလေး ဘယ်လောက်သနားစရာ ကောင်းသလဲ.. နင်တို့ ကြောင်မွေးချင်တယ်ဆိုလို့.. ငါ့သားလေးက သွားပေးရရှာတာ..
August 15, 2010 by hololodilolo	story	1 Comment